Amụma Ahịa - Zhongshan City YALIS Hardware Products Co., Ltd.
Iwu Nchedo Mpaghara
Maka ahịa ngwaike ụzọ, enwere ọtụtụ akara Italiantali na-aga maka ngwaahịa dị elu na mma na ọnụahịa. Agbanyeghị, ọ bụghị ndị ahịa niile nwere ike ịnabata ọnụahịa dị elu dị otú ahụ. Ya mere, YALIS bụ nhọrọ nke iji ngwaahịa dị elu mana ọnụahịa dị ala ma e jiri ya tụnyere European mere ọnụ ụzọ ngwaike. Mgbe ị na-eme mmekọrịta mmekọrịta YALIS, anyị na-echekwa ahịa mpaghara gị na mpaghara gị. Achọpụtara ụlọ ọrụ gị dị ka onye nkesa YALIS n'ọnọdụ gị.
YALIS na ndi nkesa anyi na - aru ​​oru iji nye ndi okacha amara na ihe eji ahaziri ngwa ahia, akwalite akara, na mmepe ahia. Dabere na ahịa dị na mpaghara, YALIS na-enye atụmatụ ndị bara uru maka ndị na-ekesa anyị ka ha nwee ike ire ndị ahịa ha ngwongwo were were. Atụmatụ zuru ezu na ngalaba azụmahịa bụ iji nyere aka mepee ụzọ maka ịmekọrịta azụmahịa n'ọdịnihu na ọkwa mba ụwa maka abamuru nke azụmaahịa na ngalaba.
Iwu Nchedo Ngwaahịa
Maka ngwaahịa ahaziri iche, YALIS na-echekwa ngwaahịa nke aka gị. Anyị na-echebe ngwaahịa gị ịbụ ndị asọmpi na ndị pụrụ iche n'ahịa, anyị ga-erere ngwaahịa gị na ndị ahịa ndị ọzọ.
1. Nkwado Nkwalite: Anyị na-emepụta ihe ngwọta mbụ nke kwekọrọ na mkpa ndị ahịa anyị. Inye ihe ahia na ngwa ahia maka nkwalite gi. Dịka ngosipụta mgbasa ozi, bọọdụ ngosi, kọlọtọ ngosi, broshuọ, wdg.
2. Ihe Ngosi & Ihe Ngosi: YALIS nwere obi uto inye ulo ngosi / ihe ngosi ihe icho mma na ihe omuma ahia nke ndi ahia na ndi nkesa. Via nkwurịta okwu miri emi ma ghọta ihe ndị chọrọ n'aka ndị ahịa anyị, ihe ngosi na-enye afọ ojuju enyere gị.
3. Ngwaahịa Ọhụrụ Na-akwado: A ga-akwalite ngwaahịa ọhụrụ nye ndị nnọchi anya anyị / ndị na-ekesa anyị tupu oge eruo, nke na-eme ka ị nwee ọ theụ nke ịbụ onye VIP, naanị karịa ọrụ.
Chọrọ onye nkesa chọrọ
1. Na ụfọdụ ọwa iji kesaa ngwaahịa ngwaike na ahịa mpaghara, yana ahịa / ụlọ ahịa / netwọkụ dị mkpa;
2. Ndị na-emepụta akara / ndị na - ekesa ya;
3. Nwere onwe gị na ahịa mpaghara: na ahịa ha, ịzụta, otu ndị ahịa; ụlọ nkwakọba ihe; nwere ike iji aka ya mezue ọrụ ahia na nkwalite;
4. Ndị ọrụ mpaghara YALIS: ahụmịhe n'ihe ụlọ / ụlọ ọrụ ngwaike, nnukwu mmata na nghọta nke atụmatụ ika YALIS.